SEO & amp; Fahaleovan-tsaina Digital - Masters Insight From Semalt
SEO & Fahaleovan-tsaina Digital - Masters Insight From Semalt
Alao sary an-tsaina ny fivarotana iray tsy misy famantarana momba azy. Ny tsara indrindra, olona liana Mety hiditra hijery ny vokatra na hangataka ny vokatra izay tsy mifandraika amin'ny fivarotanao. Ahoana anefa raha manana tranokala ianao Anarana anarana sy sary avy amin'ny vokatra azonao? Izany dia mety hahatonga ny mpanjifa ho kandida hiditra ao, hametraka fanontaniana momba nyvokatra ary hividy ny sasany aza - chrome bar stools az. Ireo tombontsoa ireo dia mety hampiely ny teny momba ny fivarotana sy ny vokatra ho an'ny olon-kafaizay midika ho amin'ny fifamoivoizana ambony sy fivarotana. Ny ohatra voalohany dia mitovy amin'ny tranonkala iray izay tsy azo atao amin'ny faharoa Ohatra dia misy tranonkala tsara marim-pototra.
Ny manam-pahaizana lehiben'ny Semalt Ireo sampana nomerika, Andrew Dyhan, dia manoritsoritra tsara ny paikady momba ny fampifangaroana ny SEO sy ny fizotry ny varotra dizitaly.
Ny fikarohana momba ny fikarohana (SEO) dia ny fizotry ny tranokala mora hamantarana,mora hizaha sy hitsikerana. Amin'ny ambaratonga fototra, ny fanavaozana dia manampy ny mpanjifa hahitanao ny orinasa eo anivon'ny an'arivony na orinasa hafa an-tapitrisany ary ampahany manan-danja amin'ny tetikady ara-barotra nomerika.
Ny SEO dia mikasa ny hampiasa ny mpiserasera amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera. Mba hahatratrarana izany,Ny tranokalanao dia tokony hifanaraka amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana (SERP). Mba hahamora kokoa ny fahatakarana izany dia misy ohatra tonga lafatra:
Isan-taona dia mihoatra ny 14 lavitrisa ny fikarohana an-tserasera. Ankehitriny, eritrereto hoe inona mety hitranga raha mikatsaka ny raharaham-barotra ny ampahany amin'ny fandinihana 14 lavitrisa. Mba hahazoana fifamoivoizana mifandraika amin'ny tranokalanao, nyNy orinasa dia tokony hifanaraka amin'ny SERP, hividianana hividianana paikady ary famokarana mediam-bahoaka.
Ho an'ny orinasa rehetra hivelatra dia tsy maintsy mamoaka dokambarotra izy. Ary ho an'ny orinasa an-tserasera,SEO dia mitovy amin'ny dokam-barotra maimaim-poana. Ny fanamafisana ny tranonkalanao dia mahatonga azy ho mora ny mitana ny pejy voalohany amin'ny SERP.
Satria misy ny finoana iraisana fa ny olona dia mijery sy mamerina mamaky ireo pejy 2 voalohany amin'ny SERP,Ny laharana eo amin'ny pejy voalohany dia manome fahafahana ny orinasanao hitadiavan'ireo olona mitady vaovao raha mividy entana.
Ahoana ny fomba fiasan'ny SEO?
Search engine crawlers dia mampiasa ny lahatsoratra mba hamaritana ny votoatin'ny pejyny hetsika izay mitondra valin'ny fikarohana, anisan'izany ny fitsangatsanganana, ny fisafoana, ary ny fanasokajiana, ary koa ny fanombanana ny fahamendrehana sy ny fanarenana.Ireo singa izay fantatra ho fandraisana anjara amin'ny kalitao dia ahitana:
URL sy anarana amin'ny tranonkala
Ny toetry ny rohy
Mba hahatakarana ny fomba fiasan'io tsingerina io, dia zava-dehibe ny mizotra amin'ny antsipiriany momba ny fomba fiasan'ny SEO:
Raha vao mitsahatra ny fitsangatsanganana, dia raketina na asehon'ny pejy ny pejy tahiry goavam-be izay misy ny fampahalalana voafantina isaky ny mpampiasa iray dia miditra amin'ny teny filamatra manokana amin'ny milina fikarohana.
3. Asa fiasa:
isaky ny manomboka ny fikarohana, manamboatra ilay fangatahana ny milina fikarohana ary ampitahao amin'ny votoatiny voasoritra. Mba hanomezana antonta marina, ny milina fikarohana dia tsy maintsy mandrefy ny maha-zava-dehibe ny pejy sy ny lalao rehetra izy ireo miaraka amin'ny angon-drakitra voatondro, ary ny teny fanalahidy voasoratra ao amin'ny SERP.
Ity fitaovana fanandramana natao hamitahana amin'ny alalan'ny teny fanalahidy katalaogy ary URL miaraka amin'ny andian-teny manan-danja. Manombantombana ireo valinteny mety hitranga ary hamerina pejy miaraka amin'ny fehezanteny na teny entina mandritra ny fikarohana. Amin'ny ankapobeny dia misy algorithm 3: On-site, algorithms amin'ny toerany tsy misy toerana sy toerana.
Ny karazana algorithm tsirairay dia mijery ireo sehatra samihafa amin'ny tranonkala irayrohy, meta tags, dika tenenina sy lohateny. Koa satria manohy manitsy ny algorithma ny milina fikarohana dia tsy maintsy miezaka hatranyny fiovana natao mba hihazonana loka goavana.
Ny valiny farany amin'ny dingana dia aseho amin'ny valin'ny fikarohana.
Ny fifandraisana misy eo amin'ny SEO sy ny marketing marketing
Ny ankamaroan'ny olona dia mihevitra fa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny SEO sy ny dokambarotra dizitaly,Mba hanazavana izany, dia zava-dehibe ny mandinika azy ireo bebe kokoa. Ny SEO dia mikendry ny hitondra valiny organika. Amin'ny lafiny iray, digital Ny marketing dia mikendry ny fisian'ny orinasa holistic iray amin'ny aterineto izay mihoatra lavitra noho ny fikarohana fikarohana. Mba hanampiana orinasa an-tseraseraMivoatra, tokony hanangana fomba fitsaboana nomerika azo itokisana ianao ary hametraka tetikady SEO mahomby.
Ny manam-pahaizana momba ny varotra sasany dia miantehitra amin'ny SEO manontolo amin'ny digital barotra. Mihabetsaka hatrany ny SEO ka lasa lafiny goavana amin'ny marketing ara-nomerika mahomby. Mba hahatakarana izany, mila misaotra firy ny SEO niova nandritra ny taona. Ireo teknika izay nahomby tamin'ny taona 90 na 2011 dia tsy hita intsony amin'izao fotoana izao izay mitaky fomba vaovao.Androany, maro ireo antony hafa izay ampiasaina hampidirana ny SEO ao anatin'izany ny media sosialy sy rohy malaza tahaka ny taloha.
Mamorona tetikady SEO mahomby
Mba hanana rafitra SEO lehibe, mila mametraka SEO mahomby tetika. Torohevitra tsara ny:
1. Tanjona tariby:
SEO mahomby dia tsy hoe fotsiny mitondra fiara mankany amin'ny tranokalanao, tokony hanampy izy mba hanamafisana tsara ny demografika mpanjifa sy ny fepetra ara-jeografika mba hahazoana antoka fa mahatratra ny fanantenana ny vokatra tianao.
2. Fomba fisainana maivana:
Ny fangatahan'i Google dia ny fitadiavan'ny tranonkala amin'ny fitaovana finday ary hanome ny mitovyfahafaham-po amin'ny mpampiasa amin'ny fitaovana toy ny olona mampiasa ordinatera.
3. Safidy bebe kokoa amin'ny milina fikarohana:
Mba hahombiazany, ny tranokalanao dia tsy tokony ho tsara fotsiny amin'ny milina fikarohana fa amin'ny alàlan'ny motera hafa.
4. Ny teny dia mifandraika amin'ny famerenana amin'ny fampiasam-bola:
Mifantoha amin'ny sainao amin'ny famantarana sy ny fampiasana ireo teny manan-danja manan-danja izay ataon'ny olona ampiasaina hitadiavana fampahalalana mba hanomezana antoka ny ROI.
5. Ny votoaty tsara sy ny tranonkala mazava:
Ny tranonkala dia tokony ho tia namana, mazava ho azy ary tokony hanana votoatiny tsara.
Amin'ny farany, eo amin'ny tontolon'ny fanovana algorithmes, tokony ho fantatrao foana izany SEO dia dingana tsy misy fiafarana. Mba hanampiana anao hiasa eo anivon'ireo fiovana rehetra ireo, eritrereto ny mpihaino anao, ary ataovy miorina mafy tetik'asa fanatsarana ary mieritreritra ny fampiasana ny tranokalanao.